Dowladda Uganda oo ciidamo u soo direysa Somalia - jornalizem
Dowladda Uganda oo ciidamo u soo direysa Somalia
Dowladda Ugandha ayaa shaaca ka qaadday iney 3,200 oo Askari oo dheeraad ah usoo direyso Soomaaliya dhamaadka bisha soo socota ee August si ay u xoojiyaan Ciidammada Midowga Afrika ee howlgalka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya.
Wargeyska New Vesion ee ka soo baxa dalka Uganda oo soo xiganaya saraakiil sare oo ciidamada dalkaasi ka tirsan ayaa daabacay iney Dowladda Ugandha diyaarisay askar tiradoodu gaareyso 3,200 oo askari kuwaasi oo tababar muddo Afar bilood ay qaadanayeen loo soo xeray dhamaadka todobaadkii aynu ka soo gudubnay.
Taliyaha Ciidammada keydka ah ee dalka Ugandha Sareeye Gaas Levy Karuhanga ayaa sheegay in Ciidammadan hadda ay diyaar u yihiin iney ka qeybgalaan howlgalka nabadda loogu soo dabbaalayo Soomaaliya oo ay qaateen tababar ku filan.
“waxa ay soo bandhigeen farsamooyin heerkoodu sareeyo oo ay qaateen,waxaan aaminsanahay hadda iney u diyaar yihiin gudashada waajibaadka loo tababaray ee ah iney ka qeybgalaan howlgalka ay ciidamada doowlada u joogaan Soomaaliya oo Ammaanka lagu soo celinayo” ayuu warkiisa raaciyey Sareeye Gaas Levy Karuhanga Taliyaha Ciidammada keydka dalka Ugandha.
Sidoo kale Kornyal Stepehen Kashure oo ah taliyaha xerada Singo oo ay ciidammadan tababarka ku qaateen ayaa xusay in Ciidammadan ay yihiin kooxdii Todobaad ee tababarka ku qaadata xeradan islamarkaana Soomaaliya ka howlgasha tan iyo bishii August ee sanadkii 2011ka.
Dowladda Ugandha ayaa hadda ah dowladda ay ka socdaan ciidammada tiro ahaan ugu badan marka laga hadlayo Ciidammada Midowga Afrika ee ka howlgalaya Soomaaliya waxaana qorshahani uu qeyb ka yahay qorshe guud oo Midowga Afrika ku kordhinayo Ciidammada ka qeybqaadanaya howlgalka AMISOM si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.